श्रीमान अफिस गएको बेला श्रीमतीले घरमै परपुरुषसँग मस्ती गर्दा…. – Patrika Nepal
मंग्सिर ९, २०७८ बिहिबार 54
काठमाडौ । विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण धेरैका घरमा समस्या आएका छन् । आफ्नो परिवारसंग सन्तोष नभएर अर्कालाई ता क्दा एक पुरुषको ज्या’न गएको छ ।
श्रीमान नभएको बेलामा अर्का पुरुषलाई घरमै बोलाएर रोमान्स गरेकै बेलामा श्रीमान आइपुगेपछि भा ग्ने क्रममा पाँचौं तलाबाट हाम फाल्दा पुरुषको ज्या’न गएको छ । यो घ’टना भारतको दिल्लीको हो ।
दक्षिणी दिल्लीको टिग्री क्षेत्रमा रहेको जेजे कोलोनीमा बसोबास गर्दै आएका ती पुरुषलाई आ’पत्तिजनक अवस्थामा ती महिलाका श्रीमानले भेटेका थिए । ढोकामा चुकुल लगाउन समेत विर्सिएर उनीहरु एक अर्कामा लि प्त हुँदै थिए । त्यही बेलामा श्रीमान आएको पनि थाहा पाएनन् ।
जब श्रीमानलाई ढोकामा देखे ति पुरुष हतार हतार भा ग्ने क्रममा भवनको पाचौं तल्लाबाट हाम फाले । उनलाई घा’इते अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो ।तर अस्पतालमा लगिएपनि उनको ज्यान भने जोगिएन । श्रीमानले रंगेहात देखेपछि देह त्या’ग गर्ने प्रयास गरेकी श्रीमती भने जोगाइएको छ ।
ति महिलालाई श्रीमान र उनका प्रेमीले बचाएका थिए । श्रीमान घर बाहिर गएको मौकामा अर्का पुरुषलाई घरमै बोलाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।बाहिर गएका श्रीमान खबरै नगरी घर फर्कदा श्रीमतीलाई रंगेहात देखेका थिए । कोठाभित्रबाट चुकुल नलगाएको अवस्थामा उनीहरु रमाइरहेका थिए ।प्रहरीले तीनै जनाको मोबाइल फोन ज फ त गरेर अनुसन्धान जारी राखेको जनाइएको छ ।
Prevकरोडौंको सम्पत्ति छोडेर सामान्य व्यक्तिसँग बिहे गरेकी जापानकी राजकुमारी अमेरिकामा बाटो बिर्सिएर हराइन्
Nextकांग्रेस १४औं महाधिवेशन : २८ जिल्लामा नयाँ नेतृत्व, कुन समूह अगाडि ?
हार्दिक बधाइ रमेश प्रसाइ बुबा बने बधाई दिनेको घुइँचो।